यक्ष प्रश्नका बीच चोलेन्द्र श्रीमान ! | रुपान्तरण
आज, ९ पुस २०७७ बिहिबार, प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकको ‘धारा ७६ को ब्याख्या संवैधानिक इजलासमा’ शिर्षक मूल समाचारसंगै प्रकाशित प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको तस्वीर निकै सांकेतिक छ । त्यसैसंग प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको ‘प्रधानमन्त्री–प्रधान न्यायाधीश खासखुस’ शिर्षकमा प्रकाशित समाचारमा उत्तिकै सांकेतिक बाक्य लेखिएकोछ – सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको न्यायाधीशहरुको आचार संहितामा मुद्दाको पक्षसंग अनाबश्यक सम्बन्ध बढाउन नहुने उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभाको बिघटन र त्यसका बिरुध्द सर्वोच्च अदालतमा परेका दर्जन रीटपछि सर्वोच्च अदालत र यसका न्यायाधीशहरु समाचारको केन्द्रमा रहनु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि, प्रधान न्यायाधीश त मुख्य आकर्षणका केन्द्र हुने नै भए ।
कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको तस्वीरमा प्रधानमन्त्री न्यायाधीशतिर ढल्केको स्पष्ट देखिन्छ । अंगद ढकालले खिचेको यो तस्वीरले धेरै कुराको ब्याख्या गर्दछ । यो तस्वीर हेर्ने मानिस एकपटक झसंग हुन्छ । उसको मनमा खुलदुली चल्न थाल्दछ – प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको भलाकुसारीले कतै प्रतिनिधि सभा बिघटनको मुद्दामा असरपार्ने त होइन ? यस्तो खुलदुली अकारण होइन । नेपालको संवैधानिक पदाधिकारीहरुको क्लबमा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको दुइवटा पद नै हो जो जनताको पहूँचमा हुँदैनन । त्यस्ता मानिस मिलेर महत्वपूर्ण मुद्दामा अनुकूल निर्णय लिदैनन भन्न सकिदैन । चोलेन्द्र राणाले अलिकति आँखा चिम्लिदा केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा पुग्ला । अथवा, केपी शर्मा ओलीले अलिकति आँखा चिम्लिदा चोलेन्द्र राणाको किन्चित कल्याण होला । तर, यो कर्म संबैधानिक मर्यादाको बिपरित हुन्छ । यसमा चोलेन्द्र राणा पक्कैपनि सतर्क हुनुपर्ने हो ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेदेखि नै सर्वोच्च अदालत र यसका प्रमुख समाचारमा छन । धेरैको मनमा चोलेन्द्र श्रीमानबाट यथोचित न्याय नपाइने हो कि भन्ने आशंका घुसेकोछ । प्रधान न्यायाधीश राणाको ब्यक्तित्व गमक्क परेर नहिंडने, स्वतन्त्र स्वभावका र सबैसंग मिल्ने भएकोले पनि यस्तो आशंका उत्पन्न भएको होला । मानिसले यसरी सोच्नुपनि अनपेक्षित होइन । एक त, राणा परिवारको छोरो त्यसैपनि रवाफिलो हुन्छ । दोस्रो, आफनै बाहुबलले प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा पुगेकोले अलिकति अहंको भाव त आउँछ आउँछ । तेस्रो, कुलीन घरानाको ब्यक्ति अलिकति ठालु त पल्टिइने भै हाल्छ । बिपरित, चोलेन्द्र श्रीमान अहंकारी छैनन । उनी सरल स्पष्ट र मृदुभाषी छन । यसो बाहिरफेर घूमघाम गर्नुपर्ने, साथी–भाइसंगको जमघट र रामरमितामा अलमलिने उनको लोकतान्त्रिक स्वभाव देखेर धेरै मानिस लोभिएकाछन ।
प्रधान न्यायाधीशले सम्भवतः भोलि शुक्रबार संबैधानिक बेन्च तोक्नेछन । त्यसपछि शुरु हुनेछ प्रतिनिधि सभा बिघटन माथिको छलफल । यो छलफल नेपालको संबैधानिक प्रणालीमा कोसे ढुंगा सावित हुनु पर्दछ । त्यतिमात्र नभएर, खोचे थाप्ने उद्देश्यमात्रले संबैधानिक प्रश्नहरु उठाउनु जायज हुँदैन । यो पटक प्रतिनिधि सभा बिघटनमा राष्ट्रपतिका तर्फबाट आएको तर्क फितलोमात्र होइन त्यसले प्रतिगमनको पृष्ठपोषण गरेको छ । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठनहुने संबैधानिक बेन्चले पक्कै पनि नेपालको संविधानमा कुनै जटिलता छन भने त्यसको निरुपणगर्न खोज्नेछ ।
जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रश्न छ – यो उनको ‘प्रोफेशनल’ जीवनमा आएको सबभन्दा ठूलो चुनौति हो । यो मुद्दाको न्यायोचित टुंगो लगाएर जनताको मन–मस्तिष्कमा चम्किने लोभ कसैले पनि संवरणगर्न सक्दैन ।
आजै बिहान मैले एउटा ट्विट गरेको थिएँ ः रिटायरमेन्टको अवस्थामा पुग्ने बेलामा के नै लोभ गर्नुछ र सम्माननीय चीफ जस्टिसलाई ? संसद बिघटन असंबैधानिक हो भन्ने उहाँलाई भन्दा अरु कसलाई थाह होला ? संविधानमाथि घात भएको समयमा सत्य र न्यायको पक्षमा उहाँको अडानले जनता खुशी हुनेछन । त्यो खुशी नै त होला उहाँको खोजी पनि !